Iindaba - Ixabiso le-phosphorus ephuzi linyuke kakhulu
Kutshanje, amaxabiso eemveliso ezinxulumene nekhonkco loshishino lweekhemikhali ze-phosphorus ziye zaqhubeka nokunyuka. Ngokutsho kwedatha ekhutshwe yi-Baichuan Yingfu, i-arhente yokubonisana nempahla, isicatshulwa se-phosphorus ephuzi ngoSeptemba 15 yayingu-60082 yuan / ton, eyayimi kwinqanaba elipheleleyo le-60000 ye-yuan ngexesha elinye, ukunyuka malunga ne-280% ekuqaleni. lonyaka; Ukuchatshazelwa yi-phosphorus etyheli ekrwada, ixabiso le-asidi ye-phosphoric lenyuka ngokuhambelanayo. Isicatshulwa ngaloo mini yayiyi-13490 yuan / ton, ukwanda malunga ne-173% ekuqaleni konyaka. U-Baichuan Yingfu uthe imarike yendawo ye-phosphorus ephuzi iqinile ngoku, kwaye ixabiso le-phosphorus ephuzi liyaqhubeka linamandla kwixesha elifutshane; Unikezelo lwe-asidi ye-phosphoric kwimarike yehla kwaye ixabiso laqhubeka nokunyuka. Ngenxa yokuxinana kwexabiso lemathiriyeli ekrwada, iiyunithi zabanye abavelisi ziye zavalwa.
Ngokutsho kwedatha ye-Baichuan Yingfu ngoSeptemba 17, isicatshulwa se-phosphorus ephuzi yayiyi-65000 yuan / ton, iphakamileyo entsha enyakeni, ngokunyuka okubukhali okungaphezulu kwe-400% kunyaka wonke.
I-Soochow Securities yathi ngokukhawuleziswa komgaqo-nkqubo wolawulo olumbini lokusebenzisa amandla, ukuveliswa kwezinto eziluhlaza ze-phosphorus kwakulinganiselwe kakhulu okanye kuphelile. Ukusetyenziswa kwamandla e-phosphorus etyheli malunga ne-15000 kwh / T. ngo-2021, umlambo osezantsi yi-phosphate (46%), i-glyphosate (26%) kunye nezinye i-phosphorus pentoxide, i-phosphorus trichloride, njl. Ixabiso le-phosphorus ephuzi liphantsi ehlotyeni. kwaye iphezulu ebusika. Ngo-2021, amandla eYunnan ayelinganiselwe kwaye ngenxa yokungonelanga kombane wamanzi, ixabiso lephosphorus emthubi lenyuka ngexesha leemvula, ngelixa unikezelo lwaqhubeka lucutheka ebusweni bamanzi aphantsi ebusika.
I-Huachuang Securities ikholelwa ukuba impembelelo yothintelo lokuveliswa kwe-phosphorus ye-yellow iyancipha ngokuthe ngcembe ukuya ezantsi, ixabiso le-asidi ye-phosphoric ehlambulukileyo inyuka nge-95% ukuya kwi-17000 ye-yuan / ton kwiveki enye, ecinezela inzuzo ye-industrial monoammonium kwixabiso elibi, kwaye inzuzo ye-iron phosphate nayo iyancipha, oku kuthetha ukuba phantsi kwemiqobo yokubonelela nge-phosphorus ephuzi, ipateni yenzuzo yezinye iimveliso ezisezantsi ziya kutshintshwa ngokuhlanjululwa kwe-asidi ye-phosphoric, ukuhambelana kwezibonelelo kulindeleke ukuba kugxininise kwishishini kwakhona.